Soo dejisan mIRC 7.46 – Vessoft
Soo dejisan mIRC
Barnaamijku wuxuu mIRC waa macaamilka classic IRC, taas oo ah, nidaam la isticmaalayo channels aasaasay of xiriir la asxaabta, asxaabta iyo qoyska. Si kale loo dhigo, waxa aad la abuuro shabakad ee IRC – nooc ah meel halkaas oo a-time dhab ah chat dadka qaba helitaanka shabakadda internetka. Tani ma aha oo kaliya isgaarsiinta laba-hab, laakiin chat a online dhab ah, kuwaas oo goob joog ahaan doona oo kaliya dadka aad rabto inaad aragto. Sida laga soo xigtay tirakoob, barnaamijka mIRC ay isticmaalaan malaayiin dad ah oo dunida ku, iyaga oo doorbiday in ay hab oo kaliya sida ay u xiriiraan si kale wax kasta oo. Iibsiga ee rakibaadda macmiilka ka ma aha wax adag, xataa kuwa ugu horeeya ee ay wajaheen leh barnaamijyada sida. Isticmaalka mIRC waxaad badbaadin kartaa gaadiidka Internet, halka tiro badan oo dad ah ka qabashada.
Waxay kaalmo brannmur
Aqoonsi Speech, soo raacay by its ereygu wuxuu via products-saddexaad
Kartida ay u qurxiyaan qoraalka iyadoo la kaashanayo of gaar ah mIRC-codes
Dhali karin download files khatar shabakadda
Comments on mIRC:
mIRC Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Spark 2.8.1
العربية, English, Українська, Français... ooVoo 3.6.9.10
العربية, English, Français, Español... Winamp 5.66
العربية, English, Українська, Français... Media Player Classic Home Cinema 1.7.10
العربية, English, Українська, Français... Orbitum 43.0.2357.157
Kadib Browser ayaa la haysto tiknoolijiyad casri ah u joogtid si raaxo leh in shabakadaha bulshada oo caan ah. In software waxaa doorashada weyn mowduucyo ah ee page layouts.